Eli libali labafazi abayili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Eli libali labafazi abayili
UJorge Neira | | Abadlali, ngokubanzi
Uyilo enye yeendawo ezimbalwa zobugcisa yintoni na uyakwazi ukudibanisa intengiso kunye nomfanekiso-ngqondweni. Ngesi sizathu, abantu abaninzi bayangena kwilizwe loyilo kwaye yonke imihla iphinda izivelise ngakumbi nangakumbi. Bobabini abasetyhini kunye nabesilisa bathathe inxaxheba amashumi eminyaka kwihlabathi loyilo, kodwa namhlanje abantu basetyhini babaluleke kakhulu.
Kweli nqaku siza kuthi Uhambo lokungena kunye nokuhlala isigxina kwabasetyhini kuyo yonke imbali yoyilo. Ukwazi imbali kubalulekile njengoko kuthintela ekwenzeni iimpazamo kwaye ukuba uyilo lomnqweno okanye umyili ofuna ukwazi, emva koko yazi le nxalenye yebali iya kukukhuthaza ngokupheleleyo.
1 Abaqambi babafazi
2 Uhlobo lokuchwetheza
Umyili esiza kuthetha ngaye kweli nqaku ngoyena, ngokufutshane, Ndibeka ithoni kwihlabathi loyilo, Ukongeza ekwamkelweni njengoyilo lokuqala lowasetyhini. Igama lakhe yayingu Cipe Pineles, Ibhinqa elizibonakalise ngokusisiseko njengowokuqala ukuqesha amagcisa eplastiki ngomzekeliso wopapasho, ukongeza ekungeneni ngempumelelo kwiholo lodumo lwabalawuli eNew York.
Ngaphandle kokuzalwa e-Austria, wayegqalwa njengowesifazane wokuqala owaziwayo kwimizobo e-United States. Ngaphandle koku, Wayengumlawuli weemagazini ezininzi ezaziwayo eUnited States kwaye bathathe inxaxheba ekwenziweni kwemiba ethile kwiZiko laseLincoln.
Impembelelo kaCipe yayintle kakhulu, kuba ungene kwilizwe loyilo lwegraphic xa kunqabile kakhulu fumana abasetyhini ngaphakathi kuyo, yiyo loo nto nawuphi na umyili wegraphic, namhlanje, emqonda njengenkuthazo kunye nomseki wesizukulwana esitsha sabayili bemizobo.
Kwiminyaka engamashumi amathathu yafunyanwa ngamaphephancwadi amabini amakhulu e-couture emhlabeni: iVogue kunye neVanity Fair kwaye oku kungenxa yobuchule bakhe bokufota kunye nemifanekiso, ukongeza kwinto yokuba ndisusa ilebheli "yamaphephancwadi okuhombisa" kula maphephancwadi mabini.
Oku kwenza ukuba iimagazini ziphumelele kwaye zihlonitshwe, ngakumbi kuba uPineles wasebenzisa i-modernism yaseYurophu ukwenza imifanekiso eyahlukeneyo. Ayisiyiyo le kuphela, kodwa nayo yayijongene nokuyila kwakhona ubungakanani beetekisi, Ke ngoku zazincinci, zilula kwaye zazinokufumaneka naphi na apha ephepheni.
Iqale ukushiya imida emiselweyo kwaye yintoni ngaphambili ebonakala ngathi kukungunda ngoku yindawo apho wawukhululekile ukwenza nantoni na. Umzekelo, imida yayingasahlonitshwa Iifoto ze-haute couture ngoku zitshintshwe yimifanekiso elula, kodwa kwangaxeshanye zinzulu kakhulu kwaye ziyile.
Ngoko ke, omabini la maphephancwadi anegama elidumileyo kulo mzobi. Enye yeendlela ezazisetyenziswa nguCipe ibizwa ngokuba yi "figurative typography". Olu hlobo lobugcisa lusasetyenziswa, kodwa ngee-XNUMXs yayiyinto entsha ngokupheleleyo. Ngobu buchule, iifoto zazingasabekwa zijikeleze iitekisi, kodwa kuphela izinto okanye imifanekiso elula ebhekisa kuyo yayixhonywe elunxwemeni.
Ngale ndlela, UPineles ukwenzile umxholo, Watshintsha iileta, wazikrwempa, wazikrazula, njl ... ukwenzela ukwenza umdlalo obonakalayo kunye nabafundi abathi, ngamafutshane, banike iziphumo ezoneleyo zokwenza ukuba zombini iimagazini ziphumelele kwaye obu buchule buqhubekile nanamhlanje .
Ukujonga izinto ngokungekho mthethweni yenye yezinto ezisetyenzisiweyo kwaye wenza imisebenzi engummangaliso, namhlanje, enokuxatyiswa. Ukutshintsha oonobumba beetekisi, imifanekiso ebonakalisiweyo, iisimboli zaseMpuma, imizobo yokuchwetheza kwaye ezinye zizinto ezazisetyenziswa ligcisa.
Nangona engasekho ngokwasemzimbeni, umsebenzi wakhe usawubambile kwaye iyaqhubeka nokukhuthazeka kwihlabathi loyilo lwegraphic, ngaphandle kwesini somyili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Eli libali labafazi abayili
yenzayo 5 iminyaka
Ngenye imini ndiya kuba lapho ……
Uyilo lwegraphic luphethe izinto ezintle kumdlalo bhanyabhanya
Uyilo kunye nePC okanye iMac?